Natao Hijanona eto ny Vavolombelon’i Jehovah | Diary 2015
Nahita ny fahamarinana izy ireo
Nanomboka nianatra Baiboly i Juana Ventura, tamin’ny asa fitoriana mbola voarara. Natao batisa tao amin’ny Reniranon’i Ozama izy tamin’ny 1960. Tsy nahazoazo azy mihitsy ny pasitera iray tao amin’ny Fiangonana Ara-pilazantsara teto Saint-Domingue. Tiany higadra i Juana fa mangalatra ny ondriny, hono. Mba hanaporofoina àry hoe mpandainga ny Vavolombelon’i Jehovah ary tsy azo inoana ny tenin’i Juana, dia nasainy nankany am-piangonana izy mba hoadinadinina momba an’ilay fivavahany vaovao.
Hoy i Juana: “Fanontaniana telo no napetrany, hoe: ‘Nahoana ianareo no tsy mifidy? Nahoana ianareo no tsy mandeha miady? Nahoana ianareo no antsoina hoe Vavolombelon’i Jehovah?’ Novaliako avy tao amin’ny Baiboly daholo ireo. Nanaraka tsara avy tao amin’ny Baiboliny ny mpiangona rehetra sady gaga hoe hay misy an’izany ao. Maro no niaiky hoe nahita ny fahamarinana. Nianatra Baiboly daholo izy rehetra, ary 25 no nanokan-tena ho an’i Jehovah.” Vao mainka nampandroso ny asa fitoriana teto Saint-Domingue iny zava-nitranga iny.
Natao hijanona eto ny Vavolombelon’i Jehovah
Nikorontana be ny toe-draharaha politika, taorian’ny nahafatesan’i Trujillo. Hoy ny Diary 1963: ‘Feno miaramila ny sisin-dalana ary nisy fitokonana sy herisetra isan’andro.’ Nandroso foana anefa ny asa fitoriana sy fampianarana. Nahatratra 1 155 ny tampon’isan’ny mpitory tamin’ny faramparan’ny taom-panompoana 1963.
Tonga teto i Nathan Knorr tamin’ny 1962. Nampiany ireo rahalahy mba ho afaka hividy tany hanaovana trano lehibe kokoa. Nandroso be mantsy ny asa fitoriana. Efitrano Fanjakana iray sy trano iray misy rihana no naorina teo amin’ilay tany. Notokanana ilay izy tamin’ny asabotsy 12 Oktobra 1963, ka i Frederick Franz, avy any amin’ny foibe, no nanao ny lahateny fitokanana. Hita hoe natao hijanona eto ny Vavolombelon’i Jehovah. Taoriana kelin’izay, dia tonga koa i Harry sy Paquita Duffield, misionera noroahina farany avy tany Cuba.
Nitombo foana na teo aza ny tolom-bahoaka
Nafotaka ny tolom-bahoaka tamin’ny 24 Aprily 1965. Vao mainka nandroso anefa ny vahoakan’i Jehovah, taorian’izay, na dia tsy nilamina aza ny tany. Nisy 63 ny fiangonana, tamin’ny 1970, ary 3 378 ny mpitory. Tao anatin’ny dimy taona talohan’io ny antsasany mahery tamin’izy ireo no tonga tao amin’ny fandaminana. Hoy ny Diary 1972: “Avy amin’ny fari-piainana samihafa izy ireo. Ao ny mpamboly, mpiompy, saofera, mpanao kaonty, mpanorina trano, mpandrafitra, mpisolovava, mpitsabo nify, mpanamboatra ny simba amin’ny fiarakodia, ary efa mpanao politika mihitsy aza. Tafaray izy ireo satria samy tia fahamarinana sy tia an’i Jehovah.”